तीज र यसको मौलिकता::Milap News
हरेक वर्ष जस्तै यसवर्ष पनि तीज नेपालीहरुको घर आँगन आउँदै छ । यो हिन्दू नारीहरुको महत्वपूर्ण चाड हो । यो चाड भाद्र शुक्ल द्वितिया देखि पञ्चमीसम्म ४ दिन मनाइन्छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा यो चाड हाम्रा अन्य चाड भन्दा लामो हुँदै गएको हो की भन्ने भान हुन थालेको देखिए पनि यस पाली भने विगतका वर्षमा जस्तो देखिएको छैन् । तीजमा खास गरी भगवान शिवको आराधना गरिन्छ भने छोरी चेलीलाई घरमा बोलाएर मिठो खुवाउने प्रचलन रहिआएको छ । यसको अर्को पक्ष भनेको नाचगान र मनोरञ्जन पनि हो । हिन्दू महिलाहरुद्वारा स्वतन्त्र र आनन्दमय रुपमा मनाइने तीज अन्य धर्म र जातजातिका नेपाली महिलाहरुले पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउन थालेका छन् । नेपालका प्राय सबै समुदायका महिलाहरुले मनाउने साझा पर्वका रुपमा विकास भइरहेको छ तीज । बहुसांस्कृतिक पर्वका रुपमा विकसित भइरहेको तीज अब हिन्दू महिलाहरुमा मात्र सीमित नरही यो सबै जातजातिका महिलाहरुले मनाउने साझा पर्वका रुपमा विकसित भइरहेको छ । नेपालीहरुका ठूला चाड दशै र तिहार पछिको तेस्रो ठूलो चाडका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ तीज ।
यो चाड मुख्य रुपले नेपालभर मनाईन्छ भने भारतका कुनै–कुनै प्रान्तमा पनि मनाउने गरेको पाइन्छ । तीज नजिकिँदै जादा बजारमातीज सम्बन्धि गीतको चर्चा भइरहेको छ । तीजको अर्को पक्ष भनेको यसको गीत सङ्गीत हो । यो अवसरमा युट्वमा तीज गीतले भरिएका छन् भने टेलिभजन, एफ रेडियोमा तीज गीतले महत्व पाइरहेका हुन्छन् । सवैतिर तीजमय बन्ने गर्दछ । काठमाडौंका पार्टि प्यालेस, प्रज्ञा भवन, राष्ट्रिय सभा गृह, युएन पार्क, कृष्ण मन्दिर र अन्य मठ मन्दिरहरुमा महिलाहरुले तीजका गीतमा कम्मर मर्काइ–मर्काइ नाचेको हेर्न पाइन्छ । काठमाडौंका विभिन्न ट्रेड सेन्टरमा तीज महोत्सव मेला नै लाग्ने गर्दछ । यस्तो मेला देशका अन्य सहरहरुमा पनि लागेको पाइन्छ । तीज विशेष कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । विभिन्न संघसंस्था तथा समुहको आयोजनामा यस्ता कार्यक्रम हुने गर्दछन् ।
तीज आउन तीन महिनाअघिबाटै अन्य गीतलाई पन्छाएर म्युजिक कम्पनीहरु तीजका गीत बजारमा ल्याउन लागिपर्ने गर्दछन् । तीजका गीतहरु धेरै बजारमा आउनु राम्रो हो । यसको भावना र मर्मलाई बुझेर मात्र गीत लेखन कार्यहोस् । तीजका गीतलाई रत्यौली नबनाइयोस् । गाईजात्रे गीत नबनाइयोस् । आफ्नो मौलिकपन कायम राख्न सकेनौ भने हाम्रो आफ्नो पहिचान नै खतरामा पर्नजान्छ भन्ने जस्ता आवाज पनि यरेक वर्ष जस्तै यस बर्ष पनि सुनिए तर यो वर्ष विगतका वर्षहरुमा जस्तो तीजका नाममा छाडा गीत भने त्यति सार्वजनिक भएको पाइएन्न ।
धार्मिक आस्था र संस्कारमा रहेर मानाइने तीज समयको माग अनुसार सही रुपमा परिमार्जन हनुपर्नेमा पवित्र धार्मिक संस्कारमा विकृति भित्रिएन लाग्यो भन्ने सबैको चासो र चिन्ताले पनि होला यो वर्ष छाडा तीज गीत कम सार्वजनिक भएका । धर्म र संस्कृति जोगाउने नाममा आडम्बर सम्भ्रान्त समाजले भित्राएका तडकभडक जस्ता विकराल विकृतिहरुलाई हटाउने प्रयत्न गर्नु सभ्य र सचेत नारीहरुको कर्तव्य हो ।
तीज नेपाली महिलाहरुको आफ्ना भावना पोख्ने पर्वको रुपमा परिचित थियो र छ तर, पछिल्लो समयमा आएर महिलाहरुको भावना पोख्ने भन्दा पनि यो व्यवसायिक पनि हुँदै गएको छ । परिवर्तन हुनु नराम्रो कुरो त होइन तर यसको भावनालाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्छ । वर्तमान पुस्ताको जिम्मेवारी भनेको हाम्रा भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई भावि पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नु हो ।
तीज पर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा तीज गीतको मूल मर्मबाट बाहिरिएर तयार पारिएका कतिपय गीतले तीजको मौसमी बजार पाए पनि यस्ता गीत मौसमी मात्र हुन् । परम्परागत सौन्दर्य गुमाएर ‘झाम्रे’ जस्तै भए कतिपय गीत भन्ने यसैसँग सम्बिन्धितहरुको गुनासो रहि आएको छ ।
तीज गीत त हाम्रो मौलिक संस्कृतिको धरोहर हो । तर हिजोआज हामी मूल मर्मतिर छैनैँ कि जस्तो लाग्छ, पारिवारिकजस्तो छैन, बरु कतै उट्पट्याङ जस्तो भएको गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ । यसको बिधान खल्बलिँदै गएकोमा चिन्तिा बढनु पनि स्वभाविकै हो । तर, यसको व्यापकतामा विकास हुँदै गएकोमा भने खुसी नै मान्नु पर्छ कि !
तीज गीत घटनाप्रद हुने हुँदा यस गीतले घटना खोज्ने भन्दा पनि क्षणिक र सस्तो रमाइलो विषयवस्तुहरु हाबी भइरहेको कतिपय पुराना सर्जकहरु गुनासो ब्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँहरुका अनुसार ‘आज भोलीका तीज गीतको पौराणिक मान्यता, घटना, विषयवस्तुसँग जोडिएको र युग सुहाउँदो, चेतना जागृत गर्ने खालका, समसामयिक विषयवस्तुहरु तीज गीतमा उठान भएको पाइदैन । त्यस्तै वर्षभरिका आफ्ना दुःख, पीरवेदना र चोटहरु सार्वजनिक गर्ने माध्यम बन्थ्यो तीज, महिलाका कुण्ठित सिर्जनाहरु बाहिर आउँथे, समकालीन नेपाली समाजको अवस्था चित्रित गर्थे तीजका गीतहरुले तर अहिले त्यस्तो छैन गीत । अहिले सस्तो र अभद्र मायाप्रेमको विषयले ठाउँ पाएको छ तीजका गीतमा ।’
हाम्रो संस्कृति र परम्परा पृथक रहेको छ । यसको जगेर्नामा हामी सबै लाग्नु पर्छ । तीजमा महिलाहरुले आफूले भोगेका सामाजिक बन्धन, पारिवारिक हिंसा र अत्याचारप्रति कटु व्यङ्ग्य तथा विद्रोह का स्वरहरु तीजका गीतमा सुनिने भए पनि विगत केही वर्षदेखि त्यस्ता गीतहरु भन्दा छणिक रमाइला गीतहरुले बजार पाएका छन् । पछिल्लो समयमा तीज गीतको मौलिक र शास्त्रीय परम्परामा ह्रास आएको छ । तीज नारीहरुको पर्व हो गीत पनि त्यस्तै झल्किने खालका हुनुप¥थ्यो । तीजका गीत अन्धविश्वास, हिंसा र विसङ्गतपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध र समानतामूलक समाज निर्माणका लागि हुनुपर्छ ।
तीजलाई महिलाहरुको चाडको रुपमा चिनिए पनि अहिले आएर पुरुषहरुले पनि तीज गीत गाउन थालेका छन् । तीज गीत र दोहोरी गीतमा फरक छुट्याउन गाह्रो भएको छ । गीत गाउने र चर्चा बटुल्ने नाममा अभद्र, अमर्यादित र छाडा गीतसङ्गीतले प्रश्रय पाउँनु हुदैन । तीजका गीतमा खास गरी माइतीघर र घरको बिम्ब पाइने गरे पनि अहिले भने युवायुवतीको प्रेमका गीतहरु बढी पाइने गरेको पाइन्छ । यो समयको माग पनि हुन सक्छ । सधै एकनासको त हुँदैन नी । समयको मागअनुसार गीतसङ्गीतको बजारमा परिवर्तन आएको केही सर्जजकहरु दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँहरु भन्नुहुन्छ ‘दर्शक स्रोताले मन पराए भने भल्गर र अशलिल भए पनि केही फरक पर्दैन । फेरि हाम्रो गीत सङ्गीतको कुनै नियम, सीमा र परिधि पनि त हुँदैन’ उत्तेजक गीत र भिडियोतर्फ आकर्षण बढ्नु समयको माग हो कि विकृति ? त्यस्तै तीजमा सन्देश मुलक गीतहरु नआएका भने होइन तर चर्चा भने उट्पट्याङ गीतहरुको बढी भएको पाइन्छ ।
यो वर्ष सार्वजनिक भएका केही तीज गीत यस्ता छन्ः-
लक्ष्मि न्यौपानेको स्वर, झलक रेग्मीको शब्दमा ‘झल्को माइतीको’, शकुन्तला थापाको स्वर, एकनारायण भण्डारीको शब्दमा ‘बाबैले सारेको सुन्तलाको विरुबा’, करिश्मा घर्तीको स्वर, रमेश बिजिको शब्दमा ‘सम्झ्यौकी आमाले’, रिता बुढाथोकी, तुलशा गुरुङ र गीता विकलगायतकाको स्वर, सरोज विरहीको शब्दमा ‘माइतीको सम्झना’, नारायण सापकोटाको शब्द, हरिदेवी कोइरालाको स्वरमा कैद भएको तीज भाका ‘रानी चरी’ बोलको गीत पुनः कल्पना कुशुमको स्वरमा, विष्णु माया गुरुङको स्वर, रमेश विजिको लय शब्दमा ‘आमा तिम्रो मन’, खुमन अधिकारी र देवी घर्तीको स्वर, महेन्द्र भण्डारीको शब्दमा ‘हरियो चुरा, सारदा थापाको स्वर र शब्दमा ‘व्रत बसेर पति पाइँदैन’, प्रकति थलाङको स्वर, बुद्धिवीर राईको शब्दमा ‘तीजैका बेला’, गायिकाद्वय जुना प्रसाईं र प्राश्ना शाक्यको स्वर र शिव हमालको शब्दमा ‘तीज आयो आफूलाई चैँ अर्कै व्याथा छ’, उमा श्रेष्ठ र डिबी लोप्चनको स्वर, दीपक शर्माको शब्द÷सङ्गीतमा ‘भाइरल तीज गीत’, मिनौ निरौलाको स्वर, श्रीषा पौडेलको शब्दमा ‘अहिलको तीज’, आशा लामाको स्वर, देबदत्त भट्टको शब्दमा ‘छम छम’, भूमिका पौडेलको स्वर, नेहा पोखरेलको शब्दमा ‘तीज आयो लै लै’, सिर्जु अधिकारी र देवराज तामाङको स्वर, सानु तामाङको शब्दमा ‘शिवजी एउटा जुराई देऊ’, शोभा केसीको स्वर, रमा अधिकारीको शब्दमा ‘नारीलाई हेप्ने दिन गैसके’, तारावीर पाण्डे र दीपा लामाको स्वर, परनिता पाठकको शब्दमा ‘तीजको बेला’, रुचि घिमिरे र सुजता केसीको स्वर, बिबि थापाको शब्दमा ‘शिवजीले शक्ति देउन’, सन्ध्या अधिकारीको स्वर, माधव भण्डारीको शब्दमा ‘नजरै जुधायौ’, विष्णु कार्की, दिवाकार भण्डारी र सिता क्षेत्रीको शब्द तथा स्वरमा ‘माइतीको भाईलाई’, नितु कोइरालको स्वर, विमल गौतमको शब्दमा ‘छम छमी तीजमा नाच्छु बरिलै’ दिनेश थापा र सीमा भण्डारीको स्वर, दिनेश र सरोजको शब्द÷सङगीत रहेको ‘पाउँजु बरिलै’, शोभा त्रिपाठी र खुमन अधिकारीको स्वर, खुमनकै शब्द÷सङ्गीत रहेको ‘तिमी चाहिन्छ’, टिका पुनको स्वर हरि विष्टको शब्दमा ‘माइती देश सम्झेर, श्रेया नेपालको स्वर, कृष्ण कट्टेलको शब्द÷सङ्गीतमा ‘माइतीको आगनमा’, महिमा विश्वकर्मा र नेत्र भण्डारीको स्वर, सन्ध्या केसीको शब्दमा ‘पसिना’, राधिका हमाल र देवी घर्तीको स्वर, हरि विष्टको शब्दमा ‘माइतीको देश’, करुण राईको शब्द र स्वरमा ‘तीजको शुभकामना’, गीता सेञ्चुरीको स्वर, भरत बराकोटीको शब्दमा ‘क्षमा दिनु है’, उमा गिरी र खुमन अधिकारीको स्वर, नेत्र अर्यालको शब्दमा ‘असीना पानी’, तुलसा थापा, सीता थापा, भागिरथा चलाउनेको स्वर, महेन्द्र विश्वकर्माको शब्दमा बेहुली बनाउँछु, लक्ष्मिप्रधान पुरीको स्वर, बिना माझीको शब्दमा ‘वर्ष दिनको तीज आउँदा’, एलिना खनाल, गणेश अधिकारीको स्वर गणेशकै शब्द तथा सङ्गीतमा ‘मुख चुच्चो पारेर’, नित्या शिबाको स्वर, शंकर अधिकारीको शब्द/सङ्गीतमा ‘बाबाको आगनी’, प्रकाश ढकाल र सावित्री जोशीको स्वर र प्रकाशकै शब्दमा ‘पातली’, पारु रञ्जितको स्वर, बाबुल गिरीके शब्द÷सङ्गीतमा ‘तीजको लहर चलिसक्यो, रामप्रसाद पाठक, राधिका हमा र मञ्जु घिमिरेको श्वर र रामप्रसादकै शब्दमा ‘कार किन्देउ किन्ने भा’, चन्द्रकला कंवार र सविना रसाइलीको स्वर, चन्द्रकलाकै शब्दमा ‘मुसुक्कै हास मायालु’, राजन कार्की, मञ्जु श्रेष्ठ र कुमारी विकको स्वर र राजनकै शब्दमा ‘तीजकै बेला’, भूमिका शाह र तेजस रेग्मी र ऋषि कडेलको स्वर, तेजसकै शब्द रहेको ‘रेलको साँचो’, काव्या आचार्यको स्वर/सङ्गीत, सबिता पोखरेलको शब्दमा ‘विरानो भो माइतीको आँगनी’, कल्पना भण्डारीको स्वर विपिन किरणको शब्दमा ‘अहिलेको तीजैमाŒ, सुजन बराइली र पूर्णकला विसीको स्वर, सुजनकै शब्दलय रहेको ‘तीजको बेलामा नाच बरिलै’, तृष्ण खडका र नारायण लोहननीको स्वरमा ममता खत्री बस्नेतको शब्द÷लयमा ‘तीजकैको भाकामा’, विमाकुमारी दुरा, शान्तीश्री परियार, धनकुमारी थापा र नरेश खातीको स्वर, नरेशकै शब्दमा ‘चाँहिदो रैछ छोरीलाई आमा बरिलै’, अमृता लुङ्गेली मगरको स्वर शान्तिप्रियको शब्दमा ‘रामी हुनी गाजलुले हो’, इन्दिरा रजक र अनिता कुवरको स्वर, बाबुल गिरीको शब्द÷सङ्गीतमा ‘दिदी बहिनी माइती घरमा’, सोमा खत्रीको स्वर देवदत्त भट्टको शब्दमा ‘गाउँ तीजमा’, पुस्कल शर्माको स्वर, लय तथा शब्दमा ‘हिरो’, सज्जन बोहोरा र विमला श्रीसको स्वर, पवित्र खत्रीको शब्दमा ‘३३ किलो सुन’, चन्द्र मरासिनी जुनाको स्वर र शब्दमा ‘भाग्यमानी छोरी’, शोभा पाण्डे र संजु लम्सालको स्वर, डा. कृष्णहरि बरालको शब्दमा ‘आए म त सङ्गीनी’, तिलक ओली र करिष्मा डिसीको स्वर र तिलककै शब्दमा ‘भैसी गयो खोलै खोला’, मञ्जु पौडेलको शब्द स्वर, दिग्गज धौरालीको शब्द रहेको ‘माइँतीको आँगन’, एञ्जिला रेग्मीको स्वर, पारु सुवेदीको शब्दमा ‘मैले त मन्त्र पढे तिम्रै नामको’, सहिमा श्रेष्ठको स्वर, शान्तिप्रियको शब्दमा ‘पहिला नम्बर सुन’, शान्ति शर्माको शब्द र स्वरमा ‘माइतीघर आइयो नि साथी’, विक्रम राना र ज्योति मगरको स्वर, करन न्यौपानेको शब्दमा ‘उठ माया जुरुक्कै नाच फुरुक्कै’, लक्ष्मी आचार्य र खुमन अधिकारीको स्वर विष्णु न्यौपानेको शब्दमा ‘म भन्दा सवै मोटा छन्’, सुरु गौतमको स्वर, कुमार कटुवालको शब्दमा ‘चाइनाको रेल’, सितल आचार्य र रिता बुढाथोकीको स्वर क्षितिज ‘आरसी कोइराला’को शब्दमा घिन घिन मादल घन्काउँदै, रमिला न्यौपाने र खुमन अधिकारीको स्वर, खुमनकै शब्द रहेको ‘भुरुरु उडेको पुतली’, भूमिका शाह । खेमराज पौडेलको स्वर, विष्णु न्यौपानेको लय तथा शब्दमा ‘बूढो जापानतिर’ लगायतका तीजका गीत बजारमा आएका छन् ।
हरेक वर्ष तीजको अवसर पारेर ७, ८ सय गीत बजारमा आउँने गर्छन । पछिल्लो समय काठमाडौं बाहिर पोखरा, बुटबलबाट पनि थुप्रै गीत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष सयौको सङ्ख्यामा नयाँ नयाँ गीत बजारमा आए पनि स केही साल पहिले गुञ्जने तीजका गीतहरु आज पनी उत्तिकै कर्णप्रिय छन् जसले आम नेपाली नारीहरुको बेदनालाई एकमुष्ठ रुपमा सम्बोधन गरेका छन् । तर आज माया र पिरती, बिछोड र मिलन, बाहेक कुनै सन्देश गीतहरुले दिएको उतिसारो पाईंदैन । आधुनिकताको नाममा आफ्नो रीतिरिवाज, धर्मकर्म अनी अनुशासित परम्परालाई कुल्चदै गए नेपाली र नेपालको अस्तित्व कता जाला ? तीज मनाइँरहदा सर्जकहरले यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।
परम्परागत रूपमा चल्दै आएको तीज पछिल्लो समयमा भड्किलो बन्दै गएको भन्ने आवजहरु पनि उठन थालेका छन् । कतिपय महिलाले यसलाई मनोरञ्जनका रूपमा पनि लिने गर्दछन् । बाध्यतात्मक रूपमा मनाउनु पर्ने पनि छ कतिपयलाई । एक महिना अघिदेखि नै यसको चहल पहल सुरु भएको छ । कतिपयले यसलाई रोक्नुपर्छ समेत भन्ने गरेका छन् । महङ्गो पहिरन, अनावश्यक गरगहनाको प्रर्दशन वास्तवमा विकृति नै हो । तीजका अवसरमा पहिरनका लागि महङ्गा कपडा र गहनाको खरिद र प्रदर्शन पनि विकृतिकै रुपमा देखिन्छन् । यो वर्षमा यसमा केही कमी आएको हो की भन्ने भदौका सुरुवाती दिनले देखाएको छ ।
परम्पराको असल पक्षको जगेर्ना गर्नु राम्रो हो तर यसलाई थप विकृति र भड्किलो बनाउनु अझ जडतामा जानु समग्र समाज र स्वयम् वर्षैंदेखि पिछडिएका महिलाको उन्नतिका लागि बाधक बनिरहेको तर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा जतिसुकै परिवर्तन भए तापनि पछिल्ला बर्षहरुमा हामी बढ्दो महिला हिंसाका बीचमा तीज मनाई रहेका छौं । बोक्सी, दाइजोको नाममा हुने महिलामाथिको यातना र हिंसा, बलात्कार महिलामाथिको दुव्र्यवहार आदि सामाजिक जीवनका नियमित घटना बनिरहेका छन् । महिलाका भनिएका तीज जस्ता पर्वहरु यस्ता घटनाहरुका विरुद्ध केन्द्रीत हुन जरुरी छ । तब मात्र यस्ता पर्व मनाएको सार्थकता हुनेछ । यस पर्वको अवसरमा महिलाहरुले यही सङ्कल्प लिनु जरुरी छ । हरितालिका तीजको अवसरमा सम्पूर्ण दिदी–बहिनीहरुमा मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।
मिलाप मासिकको भाद्र अङ्कबाट